I tattoo engunaphakade ithetha ukwakheka kwamehlo, imilomo ehlala ibukeka ipeyinti kwaye ayizange isuswe. Ndiyabulela kule ndlela yokwenza, unakho ukulibala malunga ne-eyeliner yemihla ngemihla okanye ukutshatyalaliswa kwimizuzu engapheliyo. Emva koko uyazibuza umbuzo: "Ngaba ilula nje njengoko ibonakala kuqala?". Njengawuphi na inkqubo eyenziwa kwi-salon, olu hlobo lokwakheka lunokungaphumeleli. Ngoko ke, ukuba unqwenela ukuthabatha kule nkonzo, kufuneka ufunde iimpazamo ezisisiseko zokuzenzela ngokusisigxina, ukuze uziphephe.
Ingundoqo yokwenza ngokusisigxina
Inkqubo yokubhala tattoo isigxina ihlala malunga neyure enye. Inkqubo ngokwayo iyenzeka xa usebenzisa i-anesthesia yendawo, kodwa ayikukhuseli kwimvakalelo engathandekiyo. Ukususela kwiinketho ezinikezwa yinkosi. Ukhetha ukhetho oluthandayo kwindawo ethile (amehlo, imilomo, iimbumba). Emva koko, oyingcali uyayithumela elukhumbeni usebenzisa idayi ekhethekileyo. Inqubo isebenzisa inaliti ekhethekileyo, kwaye i-pigment ifakwe phantsi kwesikhumba ukuya kwi-0.5 millimitha. Phakathi kweempembelelo eziqhelekileyo zokwenza ngokusisigxina kungabizwa ngokukhuselekileyo ukusetyenziswa kwexabiso elincinci kunye nokudibaniswa kwee-quality quality, ezinokubangela ukuba i-reaction response. Ngoko ke, ngaphambi kokuba uqale inkqubo yokwenza i-makeup, qiniseka ukuba iipalini zenziwe kwi-organic or mineral basis.
Isiphumo seentsuku zokuqala
Iintsuku zokuqala ezichaphazelekayo ngumbonakalo we-tattoo, kubalulekile ukuthambisa nge-moisturizer. Inkqubo yokuphulukisa jikelele ihlala malunga neentsuku ezintlanu. Ukuphulukiswa komlomo kuthatha iiveki ezintathu. Eli thuba linxulumene nokugqitywa okupheleleyo kwesikratshi esenziwe emlonyeni. Ngexesha lokubuyiselwa kweendawo zesikhumba emva kokumisa ngokusisigxina akukhuthazwa ukuba athathe ilanga kwaye a tyelele ibhedi.
Iingxaki zokwenza isigxina
Iiposiso eziphambili zalo mgaqo kukukhethwa kwee-shades ezimnyama xa usebenzisa i-tattoos yomlomo. Yeka ukhetho lwakho kwiimpawu zendalo zokwenza iimpepha, kuba ukuba ufuna ukususa umlomo emlonyeni, oku akuyi kusebenza kuwe.
Kwakhona apha kunokwenzeka ukuba kuthwale uhlobo olukhethiweyo lwemilebe, iilusi, ukugcwala kwemigca, ukungaqhelekanga kunye ne-asymmetry. Kusoloko kuyimfuneko ukukhumbula le mpazamo ye tattoo engunaphakade. Ngelishwa, azikho iindlela ezininzi zokulungisa ezi mpazamo. Indlela yodwa yokuzilahla kukuba ulungelelanise. Ukuba kwenye indawo ulwaphulo olungalunganga lwenziwa - lupheliswa yindlela yokudweba kunye neengulube ezikhethekileyo ngokuchanekileyo phantsi komthunzi ofanelekileyo wesikhumba. Le nkqubo inokuthelekiswa nokupheliswa kweziphene kunye nesiseko sengqondo engalinganiyo. Phakathi kwezinye izinto, unokukrazula le mveliso nge-laser.
Indlela efanelekileyo yokuphelisa iimpazamo i-ultrasonic pulse, leyo, njengokuba isipiliyoni sibonisa, inokususa ngokukhawuleza i-pigment. Unokunikezwa ukusetyenziswa kweendlela ezahlukeneyo ze-laser. Njengomthetho, iiplanga zomtshini we-laser beam zingakwazi ukungenelela kwi-dermis kwaye ziphelise idayi apho. Ewe, kuthatha ngaphezu kweenyanga ukulungisa ngokupheleleyo iimpazamo. Kufuneka ubuncinci iinkqubo ezinhlanu zifunekayo ngexesha elichanekileyo kunye nelungelo eliyimfuneko kwiiveki ezintathu. Ngethuba lokungcola kombala obomvu womlomo, ungatshintsha ube yi-blue hue. Xa usebenzisa isicelo sokwenza umzobo, kwaye ungasusi umbala, umbala ungatshintsha umthunzi, umzekelo, olo tshintsho lunokusebenza njengelanga.
Ukuze ugweme imiphumo engathandekiyo, khumbula ukuba inkqubo yokwenza isigxina ngokusisigxina kufuneka ihlale ithembeke kwiingcali eziqeqeshekileyo ezinezemfundo. I-salon, apho uyenzayo khona, kufuneka ube nelayisenisi yezokwelapha, kunye neemeko-kufuneka zihlale zizinyanga. Ukusetyenziswa kwexesha elilodwa kuphela kwaneedaliti zokubumba kuvunyelwe. Kwaye, ekugqibeleni, ukuba unesifo sokukhubazeka, kufuneka ukuba, ngaphambi kweveki ngaphambi kokuba wenze i-makeup uthathe izidakamizwa ezikhethekileyo zonyango njengoko kuchazwe ngugqirha wakho.
Inobungozi kunye nenzuzo yokwenza ngokusisigxina
Ikhefu leMelika ngeginger